Maamulka Gobalka Shabeelaha hoose oo iska fogeeyay eedeyn uga timid Abaanduulaha ciidanka Xoogga. – Gedo Times
13th December 2017 admin Somali News, Wararka Maanta 0
Cali Nuur Maxmed gudoomiye ku xigeenka Amniga dhinaca Amniga ee Shabeelaha Hoose ayaa waxaa uu sheegay in aysan jirin cid katirsan maamulkooda oo la shaqeysa Al-shabaab basle taas hadii ay jirto oo uu ogyahay Amaan duulaha Ay habooneyd in uu soo sheego kahor inta uusan warbhiinta la wadaagin sida uu hadalka u dhigay.
Mar idaacad kulmiye ay gudoomiye ku xigeenka Shabeelaha Hoose ay weeydiisay mar hadii taliskii ciidanka xooga dalka ay eedeeyn u jeediyeen Maamulkooda iyaguna ay iska fogeeyeen sida ay iskula shaqeynayaan ayaa Waxaa uu ku jawaabaabay in Aysan jirin Howlgalo muuqda oo Amaan Duulaha Ciidanka ka sameeyo shabeelaha hoose , xureynta deegaanada shabeelaha Hoose ay shabab kaga suganyihiin ayuuna tilmamay in loo baahanyahay hogaan wanaagsan ooh or kaca ciidanka xooga sida uu sheegay.
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo Maanta Cod u qaadaya Miisaaniyada 2018-ka.
Daawo Sawirada Xafladda Caleemasaarka Madaxweynaha Cusub Ee Somaliland